TCC Africa iyo Eider Africa waxay iskaashi la sameyeen Mentor Baarayaasha Xirfadaha Hore ee ka socda Sub Sahara Africa - AfricArXiv
Haddii aad cilmi-baare tahay, waxaad u badan tahay inaad aqoon u leedahay nolosha cilmi-baarista iyo dhammaan caqabadaha iyo fursadaha la socda. Waa war wanaagsan haddii aad tahay cilmi-baare ka socda Saxaraha Afrika maxaa yeelay wada-hawlgalayaashayada, TCC Afrika iyo Eider Afrika waxay ku dhawaaqeen wada-shaqeyn ay ku bixiyaan la-talin xaggaas ah.
TCC Afrika iyo Eider Afrika waxay galeen iskaashi rasmi ah oo lagu taageerayo cilmi-baarayaasha xirfadaha hore iyada oo loo marayo latalin ku saabsan noloshooda cilmi baarista. Mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee is-kafaala-qaadey cilmi-baarayaasha xirfadaha hore ayaa wajahaya fahamka meertada nololeed ee ka soo jeedinta cilmi baarista illaa daabacaadda. Taageero la'aanta xaddidan ee geeddi-socodkan, waxay gacan ka geysaneysaa heerka ka-tagitaanka ee daraasadaha jaamacadeed. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, labadaba TCC Africa iyo Eider Africa ayaa buuxin doona farqiga iyaga oo siinaya taageero asaag-faca cilmi-baarayaasha xirfadaha hore.
TCCAfrica waxay ku bixin doontaa tababar gudaha isgaarsiinta cilmiga iyo daabacaadda koorsooyinka, halka Eider Afrika ay bixin doonto hagid iyo taageero meertada nolosha cilmi baarista ee labada xubnood ee bulshada. Cilmi-baarayaasha xirfadaha hore waxay u baahan doonaan inay iska diiwaangeliyaan Koorsooyinka Afrika ee TCC si ay taageero uga helaan la-talinta.
Ilaa hadda, ugu yaraan 900 cilmi baarayaal ah oo ka socda Sub Sahara ayaa heli doona la-talin asaag ah iyada oo loo marayo iskaashigan.
Wax badan oo ku saabsan EiderAfrica
Eider Afrika waa urur sameeya cilmi baaris, isla-qaabeynta, isla markaana fuliya iskaashi, offline, iyo barnaamijyo latalin cilmi baaris oo khadka tooska ah ah oo loogu talagalay aqoonyahanada Afrika. Waxaan tababbaraynaa lataliyeyaal si ay u bilaabaan barnaamijyadooda la talinta. Waxaan aaminsanahay barashada asaag-faca, barashada cilmi baarista ku dhaqanka, daryeelida baaraha oo dhan, iyo barashada cimriga oo dhan. Waxaan ku soo kornay bulsho firfircoon oo cilmi-baareyaal ah naadiyada joornaalka cilmi baarista waxaanan la shaqeynaa macallimiinta jaamacadda si loo horumariyo tababarka cilmi-baarista ee loo dhan yahay. Degelkeenna: https://eiderafricaltd.org/
Waxbadan oo ku saabsan TCCAfrica
Xarunta Tababarka ee Xiriirka
TCC Africa waa xaruntii ugu horreysay ee tababar ku saleysan Afrika oo barta xirfadaha isgaarsiinta ee wax ku oolka ah saynisyahannada. TCC Afrika waa hay'ad abaalmarin ku guuleysatay, oo loo aasaasay sidii hay'ad aan faa'iido doon ahayn 2006 oo laga diiwaangeliyey Kenya. TCC Afrika waxay bixisaa taageero karti ah oo lagu hagaajinayo soo-saarista cilmi-baarayaasha'Ahaa iyo muuqaalka iyada oo loo marayo tababar ku saabsan xiriirka cilmiga iyo sayniska Ka ogow wax intaa ka badan oo ku saabsan TCC Afrika at https://www.tcc-africa.org/about
Ogeysiiskan waxaa markii hore lagu daabacay https://www.tcc-africa.org/900-early-career-researchers-from-sub-sahara-to-be-mentored-in-their-research-lifecycle/
Wadashaqeyn hore oo lala yeeshay TCC Africa iyo Eider Africa
AfrikArXiv, Eider Afrika, TCC Afrika, Iyo Dib u eegis waxay ku biirayaan xoogag si ay isugu keenaan saynisyahano ka kala socda Afrika oo dhan iyo saynisyahano ku hawlan cilmi baaris la xiriirta Afrika oo loogu talagalay taxane ah 3 wada hadallo dalwaddii ah iyo dib u eegis iskaashi.
TCC Africa oo kaashanaysa AfricArXiv ayaa gudbisay soo jeedin wadajir ah oo ku saabsan Awood dhisid dib-u-eegis asaage hore iyo ku-xirnaan Afrika ah.
Tags: Eider AfrikaResearchTCC Afrika